ထိန်းသိမ်းရန်အစားအစာအတွက်အနည်းဆုံးယုန်အာဟာရလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည် 14% အမျှင်ဓာတ်, 2% အဆီ, နှင့်ရေနံစိမ်းပရိုတိန်း 12%. သင်ထုတ်လုပ်မည့်သတင်းများသည်အနည်းဆုံးနှင့်ပြည့်မီရန်သေချာပါစေ, အထက်ပါအနည်းဆုံးဖိုင်ဘာပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါ, ဒါပေမယ့်အနိမ့်ပရိုတိန်းနှင့်အဆီအဆင့်ကိုစောင့်ရှောက်လော့.
ဖိုင်ဘာအဆင့် 15% ရန် 17% လုံလောက်ပါတယ်. ထက်သာ။ ကြီးမြတ်တဲ့အဆင့်ကို 17% အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ယုန်နှင့်ဖိုင်ဘာအဆင့်တွင်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်လိုသည့်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုနှေးကွေးစေသည် 22.5% နှင့်ပိုမိုမြင့်မားအဝလွန်ခြင်းနှင့် hairballs လျှော့ချရန်အသုံးပြုကြသည်.
ပရိုတင်းဓာတ်ပါဝင်မှုအဆင့်များရှိသင့်သည် 15% ရန် 19%. ဖိုင်ဘာအဆင့်သည်ပရိုတိန်းအဆင့်ထက်ကြီးကြောင်းသေချာပါစေ. အစားအစာတွင်ပါ ၀ င်သောပရိုတင်းများသည်ဆီး၌အမိုးနီးယားပိုမိုများပြားစေသည်. ပရိုတင်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာထားခြင်းကပိုကောင်းသည် 15%.
အဆီအဆင့်နိမ့်ဖြစ်သင့်သည်, ပတ်ပတ်လည် 3% ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း. တောင့်တင်းတဲ့အဆီပါဝင်မှုများလေလေ၊, ဒါကြောင့်အဝလွန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်. အခွံမာသီးများနှင့်အတူလုံးလေးများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ, အစေ့, စသည်တို့. အထဲတွင်, အဆီပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့်အစာမကျွေးနိုင်ပါ.
ကျနော်တို့ကတည်းကယုန်လုံးလေးများ၏စက်နှင့်ရေးဆွဲရေးကိုသိကတည်းက, ပြုမူရန်တွန့်ဆုတ်ကြပါဘူး. ယုန်ကယ့်ကိုသူတို့ပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်
သင်ဘယ်ဟာကို ၀ ယ်သည်, အမြဲတမ်းတူညီသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်လုံးလေးများအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ. အချို့ယုန်များသည်အစာကျွေးမှုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကောင်းစွာမစွမ်းဆောင်နိုင်သဖြင့်အစာခြေပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်. သင်ပြောင်းလဲလိုပါကအစာဟောင်းကိုအစာအသစ်နှင့်ရောသောယုန်အစာကြေလမ်းကြောင်းကိုအသစ်သောအစာနှင့်ရောစပ်ရမည်။. သင့်အားအသစ်သောအစာသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းရန်သင့်အားအဟောင်း feed အလုံအလောက်ရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ. အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကာလအတွင်းတဖြည်းဖြည်းလုပ်ဆောင်ပါ. ဖြစ်နိုင်လျှင်, ရိုးရိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့်လျှပ်စစ်ပြားချပ်ချပ်အလုံးလေးတစ်ခုပါ ၀ င်သည့်ဝယ်ယူနိုင်သည်, အသေးစားcoverageရိယာလွှမ်းခြုံ, ပြောင်းလဲမှုကိုရှောင်ရှားရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်ယုန်အစာတောင့်များထုတ်လုပ်ရန်ဈေးသက်သာပြီးစားသုံးမှုနည်းသည်.
တောင့်တင်းများကိုအိတ်တစ်လုံးထဲတွင်အေး။ အေးအောင်ထားပါ, ခြောက်သွေ့သောနေရာ. ဤနည်းဖြင့်လုံးလေးများကိုအမှိုက်များမှကာကွယ်လိမ့်မည်, နေရောင်ခြည်, မှောငျမိုကျသော. အဖုံးကိုပိတ်ထားရန်ကြိုးစားပါ၊ ၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားများ၏အခွင့်အလမ်းကိုလျော့နည်းစေသည်.
မျိုးစေ့များနှင့်အစေ့များကိုယုန်အစာတောင့်များနှင့်မရောပါနှင့်, ယုန်က၎င်း၏အကြိုက်ဆုံးပစ္စည်းများရွေးချယ်ပါနှင့်ကြွင်းသောအရာထားခဲ့ပါအဖြစ်, ဆိုလိုတာကမျှတတဲ့အစားအစာကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. သင့်ယုန်ကိုမကျွေးပါနှင့်. ယုန်များတွင်အဝလွန်ခြင်းသည်တိုတောင်းသောသက်တမ်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်. အများဆုံး 1/8 နှုန်းတစ်ခွက်၏ 1.8 တစ်နေ့လျှင်ဖိုင်ဘာအလုံးကြီးတစ်လုံး၏ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်သည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်. ငယ်ရွယ်ကြီးထွားလာယုန်သည်, လုံးလေးများသည်အထိလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်6ရန် 8 လပေါင်းများစွာ, ထို့နောက်အထက်တွင်အဖြစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပမာဏလျှော့ချ.
ပထမ, ကောင်းသောအာလူး. pelletizing စဉ်အတွင်း, ဓာတ်ကူးခြင်းဟုခေါ်သောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုရှိသည်, သောအရသာအရသာဆောင်တတ်၏ လုံးလေးများကျွေးပါ နှင့်ယုန်အစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့လုံးလေးများအာခေါင်တိုးမြှင့်. ရလဒ်အနေဖြင့်, ယုန်၏စားသုံးမှုတိုးလာနိုင်ပါတယ် 10%-15%.
ဒုတိယအချက်, သင့်လျော်သောလုံးလေးများတင်းကျပ်. Feed pellets တောင့်တင်းမှုသည်စိုစွတ်သော - ရောနှောသောအမှုန့်အစာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်တိုးပွားလာသည်, ယုန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝါသနာအတွက်ခက်ခဲတဲ့အရာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့သွားတွေကိုကြိတ်ဖို့ပိုသင့်တော်ပါတယ်.
စတုတ်ထ, အစာခြေအစာကြေနှုန်းကိုတိုးတက်စေ, နှင့်အူလမ်းကြောင်းအစာခြေခြင်းနှင့်ယုန်၏စုပ်ယူဘို့ကောင်းလှ၏.
ပဉ္စမအချက်, ပိုးသတ်နှင့်ပိုးသန့်ဆေး, ထို့အပြင်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုလျှော့ချပေးသည်. လုံးလေးများကျွေးမွေးသည်, အထိတိုတောင်းသောအချိန်မြင့်မားသောအပူချိန်ပြီးနောက် 70 ℃ -100 the ဖိလုပ်ငန်းစဉ်၌, ၎င်းသည်ကပ်ပါးကောင်၏ဥနှင့်ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအဏုဇီဝသက်ရှိများကိုသေစေနိုင်သည်, ယုန်ရောဂါသိသိသာသာလျှော့ချအောင်. အပြင်, မှိုသွားရှောင်ရှားရန်အချိန်အတွက် feed ကိုလုံးလေးများခန်းခြောက်ရန်လိုအပ်သည်.